Iimaski ezikhuselayo zibandakanya iimaski ezikhuselayo zemihla ngemihla kunye nemaski yokhuselo lwezonyango
Imaski yokukhusela imihla ngemihla
Umzimba wemaski yemaski yokhuseleko yemihla ngemihla yenziwa ngezinto zokucoca. Iimaski zemihla ngemihla zokukhusela zihlukaniswe ikakhulu kwiimaski zothuli kunye nemaski echasene nentsholongwane.
Imaski zothuli zinokhuselo kwii-aerosols ezinothuli. I-masks-proof masks yenzelwe ikomityi yendebe, enokuthi ilingane nomlomo kunye nempumlo ngokufanelekileyo ukufezekisa ifuthe lokuthintela uthuli. Imaski zothuli zihlala zisetyenziselwa ukuvimba uthuli kunye negesi yokuphelisa, kodwa azikwazi ukuhluza iintsholongwane.
Imaski elwa neentsholongwane ziyinto yokuphefumla esetyenziselwa ukukhusela amalungu okuphefumla kumachiza emfazwe anetyhefu kunye nothuli oluqhumayo.
Imaski yokhuselo lwezonyango
Ubuso bemaski yokukhuselwa kwezonyango yahlulahlulwe yangaphakathi, phakathi kunye nolwangaphandle. Ungqameko lwangaphakathi luyinto eqhelekileyo ecocekileyo yokucoceka kunye nelaphu elingelolokwendalo.Icandelo eliphakathi li-Ultra-entle polypropylene fiber melt-blown material layer. Umaleko wangaphandle lilaphu elingelolukiweyo kunye ne-polypropylene ye-Ultra-nyembamba encibilikayo.
Yeyona hydrophobic kwaye inokuphefumla.Inefuthe lokucoca ngokubalulekileyo kwi-aerosols ezinentsholongwane kunye nothuli olucekeceke olufanelekileyo. Iziphumo zokucoca zizinto zonke zilungile, kwaye izixhobo ezisetyenzisiweyo azinabungozi kwaye zingenabungozi.Kuyinto entle ukuyinxiba.
Inokuthintela usulelo olubangelwa yintsimbi yokuhanjiswa komoya ≤ 5μmg usulelo losulelo kunye nokuhamba umgama kufutshane nezifo ezibangelwa yidrophu. Ukusebenza kokucoca amasuntswana ezinto zemaski akukho ngaphantsi kwe-95%, kwaye nenqanaba lokukhusela liphezulu.
Imaski yokukhuselwa kwezonyango isetyenziselwa ukukhusela umzimba womntu kumasuntswana asemoyeni, ukukhuselwa kwabasebenzi kwezonyango kwiindawo ezinesifo esosulelayo, ukukhuselwa kwabasebenzi intsholongwane elebhu, ukhuseleko lweentlobo ezahlukeneyo zabasebenzi ngexesha lobhubhani wezifo ezosulelayo. iikhemikhali, abasebenzi basemgodini, abasebenzi abangadibani nepoliyo, njl.